Kudya uye Chikafu - Vondt.net
Dura Archives: Kudya uye Chikafu
Unofarira zvinokonzerwa nekudya pane hutano hwako? Pano iwe unowana zvinyorwa mune echikamu chekudya uye chikafu. Nekudya isu tinosanganisira zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakubika zvakajairika, miriwo, zvisikwa zvisikwa, zvinwiwa uye zvimwe zvinwiwa.
- Maitiro Ekudya Kwemaguta Akagwinya!
10 / 08 / 2016 /0 Comments/i Kudya uye Chikafu, unhu Articles/av kundikuvadza
Chidzidzo chakaburitswa mupepanhau rekutsvaga The American Thoracic Society yakaratidza kuti kudya chaiko kunogona zvakare kugadzirisa basa remapapu nemapapu ane hutano. Vatsvagiri vakaona kuti kuve nehurombo hwepamusoro hwekudya kwakabatana zvakananga kune yakaderedzwa njodzi yekukudziridza chirwere chemapapu.
Zvirwere zvemapapu idambudziko guru muNorway nepasirese. Muchokwadi, COPD ndiyo yechitatu inotungamira yekurapa chikonzero chekufa pasirese - saka kana iwe uchikwanisa kudzora mukana wechirwere chemapapu nekudya yakawanda fiber, kusanganisira michero nemiriwo, saka iwe unofanirwa kuita zvaunogona kuzvikurudzira uye kuteedzera izvi.
Fiber yekudya inosanganiswa nehutano hwemapapu huri nani
1921 varume nevakadzi vakapinda muchidzidzo - kunyanya muboka rezera 40-70. Chidzidzo ichi chakatarisa zvinhu zvakasiyana zvakaita sehunhu hwehupfumi, kuputa, huremu nehutano usati watanga kudzidza. Mushure mekutora data, vakapatsanura vatori vechikamu zvinoenderana nekutenga kwefiber mumapoka epamusoro uye ezasi. Boka repamusoro rakadya avhareji ye17.5 gramu yefibre pazuva zvichienzaniswa neboka repazasi iro rakadya chete magiramu gumi nemashanu. Kunyangwe mushure mekunge mhedzisiro yagadziridzwa zvinoenderana nezvinhu zvinoshanduka, zvinogona kutaurwa kuti iro boka rine yepamusoro fiber rinewo hutano hwakanaka hwemapapu. Iwe une zvekuisa? Shandisa iyo yekumunda munda pazasi kana yedu Facebook Page.
Mhedzisiro yacho yakanga yakajeka uye yakajeka
Pakati peboka repamusoro nefibre inodya magiramu 17.5 pazuva, zvakaonekwa kuti 68.3% yaive neyakajairika mapapu kushanda. Muboka rezasi rine yakaderera fiber inodya, zvakaonekwa kuti 50.1% yaive neyakajairika mapapu mashandiro - musiyano wakajeka ipapo. Iko kuitika kwekurambidzwa kwemapapu kwaive kwakanyanya zvakanyanya muboka rine yakaderera fiber yezvinyorwa - 29.8% maringe ne14.8% mune rimwe boka. Mune mamwe mazwi: Edza kudya chikafu chakasiyana chinosanganisira miriwo, michero uye zvimwe zvinhu zvine yakakwira fiber yezvinyorwa.
Fiber ingagadzira sei mapapu ane hutano?
Chidzidzo ichi hachigone kutaura ne100% chokwadi chikonzero chaicho chekuti fiber yakapa hutano hwemapapu huri nani, asi ivo vanotenda kuti yakabatana nefibre inodzivirira kuzvimba. Ivo zvakare vanotenda kuti nekuda kwekuti iyo fiber inobatsira kune yakavandudzwa yemukati maruva - izvi zvakare zvichave nechokwadi cheyese yakagadziriswa immune immune kuzvirwere. Kuzvimba kuri pamudzi wehosha zhinji dzemapapu, uye kuderera kwakawanda mune ino mhinduro yekuzvimba kunogona kuve nekukanganisa kwakanaka pahutano hwemapapu. Yakakwira fiber zvemukati mukudya zvinosanganisirwa nekuderedzwa CRP (C-inoshanda mapuroteni) zvemukati - inova mutyairi wekuwedzera kuzvimba.
Muchidimbu, 'Idya michero nemiriwo!' mhedziso yenyaya ino. Vatsvagiri zvakare vanotenda kuti isu tinofanirwa kuregeredza mishonga nemushonga senzira chete yekurapa yakanangana nezvirwere zvemapapu uye panzvimbo pezvo tarisa pane yakagadziridzwa ruzivo rwekudya uye kudzivirira. Kudya kune hutano kunofanirwa kuvewo zvakare kwakabatanidzwa nekurovedza muviri uye kuwedzerwa kurovedza muviri muhupenyu hwezuva nezuva. Kana iwe uchida kuverenga chidzidzo chose, iwe unowana chinongedzo pazasi pechinyorwa.
Inzwa wakasununguka kugovana chinyorwa ichi nevamwe vaunoshanda navo, shamwari uye vaunoziva. Kana iwe uchida zvinyorwa, kurovedza muviri kana zvimwe zvakadaro zvakatumirwa segwaro nekudzokorora uye nezvimwe, tinokubvunza se uye sangana kuburikidza kuwana Facebook peji pano. Kana iwe uine chero mibvunzo, ingo taura zvakananga muchinyorwa kana kutibata (yakasununguka zvachose) - tichaita zvatinogona kuti tikubatsire.
EDZA IZVI: - 6 Exercises Kupesana neSciatica uye Nhema Sciatica
Verenga zvakare: - 6 Anobudirira Ekusimbisa Masimba Ekurapa Knee
Wakanga uchiziva here kuti: - Kurapa kwechando kunogona kupa zororo rekurwadziwa kumaronda uye mhasuru? Pakati pezvimwe zvinhu, Biofreeze (unogona kuodha pano), iyo inowanzo kuve neyezvisikwa zvigadzirwa, chigadzirwa chakakurumbira. Bata nesu nhasi kuburikidza ne yedu Facebook peji kana iwe uine mibvunzo kana uchida kukurudzirwa.
- Iwe unoda rumwe ruzivo kana uine mibvunzo? Bvunza wako wezvehutano hwakakodzera mupi zvakananga (mahara) kuburikidza neyedu Facebook Page kana kuburikidza neyedu «Bvunza - GADZIRA Pindura!"-koramu.
Isu tiri vamwe vakasununguka basa uko Ola naKari Nordmann vanogona kuwana mhinduro dzemibvunzo yavo nezvematculoskeletal hutano hutano - vasingazivikanwe chero kana vachida.
Photos: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freemedicalphotos, Freestockphotos uye akaendesa mipiro yevaverengi.
Iyo hukama pakati pekudya fiber yekudya uye basa remapapu muNHANES, Corrine Hanson et al., Zviziviso zveAmerican Thoracic Society, doi: 10.1513 / AnnalsATS.201509-609OC, rakabudiswa online Ndira 19, 2016, abstract.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Lunger.jpg?media=1648573622 435 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2016-08-10 20:25:092022-03-18 17:27:23- Maitiro Ekudya Kwemaguta Akagwinya!
Cherry Lowers Mukana weGout
02 / 08 / 2016 /0 Comments/i Kudya uye Chikafu, unhu Articles/av kundikuvadza
Chidzidzo chakaburitswa mumagazini yekutsvaga Arthritis & Rheumatism chakaratidza kuti kudya macheri kunogona kuporesa zvakanyanya, pakati pezvimwe zvinhu, gout. Kudya Cherry kwemazuva maviri chete (!) Mukati megore kwakatungamira kune 2% kuderedzwa mukana wekukudziridza gout.
Gout ndeimwe yemaitiro akajairika eArthritis - iyi fomu yegout inokonzerwa neakawanda uric acid mumuviri. Kuwedzera kwezviitiko zve uric acid mumuviri kunogona kutungamira ku uric acid makristasi mune majoini, kazhinji kazhinji mune chigunwe chikuru. Uric acid kuvaka-kumusoro (inonzi tophi) inoita kunge mapundu madiki pasi peganda.
Chidzidzo chakakosha kuratidza mhedzisiro yezvakawedzerwa masikirwo
Zvizhinji zvekuwedzera zvinowedzera zvinogona kuita zvakafanana zvakafanana nemapota machena mapiritsi nemishonga - isina mhedzisiro. Ichi chidzidzo chakaratidza kuti ma cherries, nekuda kwavo kwakanyanya zvemukati maantioxidants uye echisikigo anti-kuzvimba mhedzisiro, ane basa rekurapa nekudzivirira mafomu e gout - kusanganisira gout
Chidzidzo chakatevera vatori vechikamu pamusoro pegore 1
Chidzidzo chakaongorora vatori vechikamu 633 pamusoro pegore rese rekarenda. Ivo vaiteverwa kumusoro pamusoro pezvikamu zvakaita sezviratidzo, kuitika, njodzi zvinhu, mishonga uye zvakasikwa zvakakwana, kunwiwa kwema cherries - zvese rudzi rwekudya (zvakasikwa maringe nekutora) uye kangani. Vatsvakurudzi vakafunga kuti imwe yaishandira cherries yaive hafu yekapu - kana gumi nemaviri cherries.
Cherry kudya - Shoma mukana wekuti gout
Pavakatevera boka mushure megore rimwe, zviverengero zvakaratidza kuti avo vaidya cherries - mune zvishoma semavhisi maviri mugore rimwe chete - vaive ne1% mukana wepazasi wekudzokazve uye kuputika kwegout. Izvo zvaingoonekwa kuti kukura kwakakura kwema cherries - nekufamba kwenguva - kwaive kwakabatanawo nekuderera kwegout. Kana iwe ukabatanidza kudya kwecheri neallopurinol (mushonga unoderedza uric acid zvemukati) waona kuderera kweanosvika 2% mukurwiswa kwegout.
Kudya kwakakosha kune avo vanotambura negout. Vanhu vane chirwere cheArthritis vanofanirwa kutarisa kudya zvinopesana nezvirwere uye vane kudya kwakanyanya muma antioxidants. Tinotarisira kumiedzo mikuru yakasarudzika kuve nechokwadi cheicho macherry anogona kuitira avo vane gout - asi isu tinofanirwa kutaura kuti zvinoita sekuvimbisa kwazvo!
Verenga zvakare: - 6 Exercises inopesana neSciatica
Zhang et al, Cherry Consumption uye Njodzi Yekudzokorora Gout Kurwiswa
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Kirsebær.jpg?media=1648573622 466 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2016-08-02 14:39:152022-03-18 17:26:58Cherry Lowers Mukana weGout
Peji 1 ye16123>»